China YEJ2 usoro akpa brek atọ-adọ asynchronous moto factory na suppliers | Leadrive
YEJ2 usoro akpa breeki atọ na-adọ asynchronous moto
Ejiri usoro ndị a na-eji eriri igwe akpaaka na njedebe na-adọkpụghị adọkpụ nke moto ahụ. Mgbe moto na-efunahụ ike, a na-akpachapụ diski breeki nke breeki a na-akpaghị aka megide mkpuchi azụ nke moto ahụ iji mepụta esemokwu braking.
Kwụsị moto ahụ, oge nkwụnyeghị ọrụ na-enweghị usoro site na obere ruo nnukwu, 0.15 ~ 0.45S. Nke a na usoro nke Motors na-ọtụtụ-eji n'ibu nhazi igwe ngwaọrụ na erute igwe na nkwakọ, woodworking, nri, Machinery maka Chemicals, textiles, ewu, ụlọ ahịa, Rolling ụzọ, wdg na-eji dị ka draịva.
◎ Usoro breeki: ike ọdịda breeki
Zọ: Power Off Brake
◎ Ike / Ike: 0.55 ~ 45kW
Method Usoro mmezi: Ndozi okara
Zọ: Na-agbagharị ọkara
Nke gara aga: YD2 usoro pole-agbanwe multi-ọsọ atọ-adọ asynchronous moto
Osote: YVP usoro usoro atọ nke asynchronous maka usoro ọsọ ọsọ ọsọ
Atọ-adọ asynchronous moto maka nkume grindi ...
IE2 usoro elu arụmọrụ atọ-adọ asynchro ...